त्रिपक्षीय गोर्खा प्राविधिक समितिलाई बिजिडब्लुएस अध्यक्ष देवानको खुलापत्र
सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवान जेपी , अध्यक्ष, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी
प्राविधिक समितिका प्रतिनिधिहरु,
(मार्फत नेपाली राजदूतावास, लन्डन )
श्री प्राविधिक समितिका सदस्यज्यूहरु,
प्राविधिक समितिले तयार पारेको एउटा तदर्थ प्रतिवेदनमा विभिन्न गोर्खा संस्थाहरुले उठाएका हरेक बुंदाहरुलाई समावेश गरियो । तर ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्लुएस) ले छैठौं तथा सातौं इन्डियन पे कमिशनको सुझाव अनुसार भारत सरकारले आफ्नो सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन बढाएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरियोस भनेर दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरियो। वास्तवमा त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भारत सरकारले पेन्सन बढाए अनुरुप नै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुका लागि पनि समय अनुकूल पेन्सन बढाइनु पर्थ्यो, साथसाथै समान पेन्सन लगायतका अन्य मागहरुका लागि लडाईं जारी रहन्थ्यो ।
ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्वन्धमा छलफल गर्न २९ मार्च २०१७ मा पहिलो बैठक बस्यो । सो बैठकमा नेपालका राजदूत लगायत सबै हस्ताक्षरकर्ताका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । सो बैठकमा बिजीडब्लुएसले छैठौं तथा सातौं इन्डियन पे कमिशनको विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न प्रस्ताव ग-यो जुन अहिले सम्म गोर्खा पेन्सनका लागि स्वीकृत भै सकेको छैन । बैठकमा उपस्थित ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले स्पष्टरुपमा सो विषयमा आगामी बैठकहरुमा छलफल गरिने पुष्टि गरेका थिए । तर त्यसपछिका बैठकहरुमा बिजीडब्लुएसलाई निम्तो नै गरिएन । यहाँसम्म कि त्यसपछि बसेका बैठकहरुको निर्णयबारे हामीलाई पनि जानकारी दिईयोस भन्ने हाम्रो आग्रहको पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।
त्यस्तै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै गठित प्राविधिक टोलीका सदस्यहरुलाई कुन आधारमा छनोट, अझ भनौं मनोनयन, गरियो ? उक्त टोलीको भूमिका तथा जिम्मेवारी र छैठौं तथा सातौं इन्डियन पे कमिशनको सुझावलाई पनि ब्रिटिश सरकारसंग छलफलको आधार बनाईयोस भन्ने हाम्रो सुझावलाई जानी, जानी बेवास्ता गरेकाले सो वार्तामा मध्यस्थको भूमिका खेलेका नेपालका राजदूतलाई यो खुला पत्र लेख्न हामी वाध्य भएका हौँ । हामीले यी विषयहरु समेटेर महामहिम राजदूतज्यूलाई एउटा रजिस्टर्ड पत्र पठायौं, त्यस पछि अर्को पत्र पनि पठायौं । तर यसबारे राजदूतावास मौन रह्यो । किन ?
स्मरणीय छ कि पाँचौं इन्डियन पे कमिशनको पेन्सन वृद्धिको सुझाव भन्दा बढी हुने गरी ब्रिटिश सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका लागि पेन्सन बढाएको थियो । तर त्यस्तो एक पटक मात्र भयो । त्यसैले त्रिपक्षीय सन्धि अनुरुप छैठौं तथा सातौं इन्डियन पे कमिशनको सुझावलाई पनि समेटेर ब्रिटिश सेनाका सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन निश्चित समयमा वृद्धि गर्दै लगिनु पर्दथ्यो । यो समान पेन्सन भन्दा फरक कुरा हो, तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पनि ।
हामीले उठाएको विषयको महत्व र औचित्यलाई ब्रिटिश सरकारले गरेको पछिल्लो घोषणाले सहि साबित गरेको छ । छैठौं इन्डियन पे कमिशनले स्थापित गरेको मान्यता र बिजीडब्लुएसले उठाएको महत्वपूर्ण विषयलाई पन्छाइएकाले नै गोर्खा सैनिकहरुले अहिले क्षति व्यहोर्नु परेको तथ्य प्राविधिक टोली र नेपाली दूतावासले अब स्वीकार्नै पर्छ । साथै यसले बिजीडब्लुएसलाई पछिल्ला बैठकहरुमा सहभागी नगराइनु र सिधै राजदूतज्यूसंग उठाईएका प्रश्नहरुको पनि कुनै जवाफ नदिने गर्नु एउटा राजनीतिक दाउ पेच पो थियो कि? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । राजदूत महोदयले यसको जवाफ दिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
केहि गोर्खा संगठनहरुको पछिल्लो पेन्सन वृद्धि स्वीकार्दैनौ भन्ने भनाइ पनि आश्चर्य लाग्दो छ । उनीहरुले के कुरा बुझ्न सकेको देखिदैन भने ब्रिटिश सरकारले अहिले गरेको घोषणा सातौं इन्डियन पे कमिशनको सुझावको तीन वर्ष पछि आएको हो । वास्तवमा यो घोषणा तीन वर्ष अघि नै गरिनुपर्थ्यो । छैठौं इन्डियन पे कमिशनको सुझाव लागू नै गरिएन र १३ बुंदे मागसंग यसको कुनै सम्वन्ध नै छैन । त्यसैले ती संस्थाहरुले नेपाल सरकारसंग हाम्रो मागहरुबारे के भै रहेको छ ? भनेर प्रश्न गर्नु पर्दछ ।
छैठौं इन्डियन पे कमिशनको सुझाव लागू नै नगरिनु र सातौं इन्डियन पे कमिशन (सिपिसी) को सुझावलाई अक्षरसः कार्यान्वयन नगरिनु पेन्सन पाउने सबै गोर्खालीहरुका लागि ठूलो क्षति हो । त्यस्तै यसले अप्रिल १९७५ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरुले कहिल्यै पनि समान पेन्सन नपाउने स्थिति (यदि ब्रिटिश सरकारले चाहेको भए पनि) पैदा गरिदिएको छ । गोर्खा अभियानलाई नेतृत्व गरी रहेका सबैजसो यो समूहमा पर्दछन् , तर उनीहरुले शुतुर्मुर्गले जस्तै आफ्नो आँखा छोपीरहेका छन् । अनौठो कुरा त के छ भने यो विषय एएफपीएस ७५ पेन्सन पाउने तर आईपीसीसंग सम्बन्धित पेन्सन वृद्धि नपाउने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले सबैका लागि भनेर उठाई रहनुपरेको छ ।
- सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवान जेपी ,
(१५ मार्च २०१९)
अध्यक्ष देवानको खुलापत्र :
लण्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई अध्यक्ष देवानको पत्र :